भदौ २९, काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमण बढेसँगै गत वैशाखदेखि बन्द रहेका राजधानीका संग्रहालय खुल्न थालेका छन् ।
राजधानीका नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, गणतन्त्र स्मारक, छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालय, मुद्रा संग्रहालय र हनुमानढोका दरबार संग्रहालय स्वास्थ्य मापदण्डपालना गरी खुला गरिएको हो । संग्रहालय खुला गरेसँगै अवलोकनकर्ताको भीड लागेको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक हप्तामा छ दिन खुला हुन्छ । बुधवार नारायणहिटी अवलोकनकर्ताका लागि बन्द गरिन्छ । मंगलवार भने आधा दिन खुला गरिने गरेको संग्रहालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । हनुमानढोका दरबार हप्तामा सातै दिन सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खुला हुने गरेको छ ।
दरबारको ढुकुटी भवनमा गरगहनासम्बन्धी प्रदर्शनी जारी छ । दरबार क्षेत्रभित्रका नासलचोक, लोह चोक, पुतली बगैँचा अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा विदेशी प्रवेशको टिकटको शुल्कको २५ प्रतिशत डेढवर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले संग्रहालयलाई दिएको छैन । महानगरसँग सम्झौता भएअनुसार रू. तीन करोड ५० लाखभन्दा बढी पैसा लिन बाँकी रहेको हनुमानढोका दरबार संग्रहालयका प्रमुख सन्दिप खनालले जानकारी दिए ।
महानगरले पैसा नदिएपछि संग्रहालयले पनि टिकट काट्न शुरु गरेको छ । संग्रहालय प्रवेश गर्दा अब विदेशीले रू. ३०० र नेपालीले रू. ३० को टिकट काट्नुपर्छ । महानगरले भने हनुमानढोका दरबार क्षेत्र प्रवेश गरेको रू. एक हजार शुल्क विदेशीसँग लिने गरेको छ । रासस